China Auto Ac Compressor uye Clutch Assembly Gadzira Fekitori yeToyota Passo / Toyota Corolla / Toyota Terios vagadziri uye vanotengesa | Hollysen
Rotary vane compressor, inozivikanwawo seye kutsikisa compressor, inova iri mhando ye rotary compressor. Iyo humburumbira yeiyo inotenderera vane compressor ine mhando mbiri: denderedzwa uye denderedzwa. Mune rotary vane compressor ine yakatenderera cylinder, kure-kwepakati chinhambwe cheiyo main axis yeiyo rotor uye pakati peiri humbwa inoita kuti rotor ive padyo nemhepo inlet uye kuburitsa pane yemukati peiri siringi. Mune rotary vane compressor ine oval silinda, iyo huru axis yeiyo rotor inopindirana neiyo geometric nzvimbo yeiyo ellipse, uye iyo rotor iri padyo nepakati pemukati memaviri mafupi maekisesa eiyo ellipse. Nenzira iyi, iko kusangana pakati peye rotor mashizha neiyo main axis inokamura humburumbira munzvimbo dzinoverengeka. Kana iyo shaft huru ikafambisa iyo rotor kutenderera imwe kutenderera, huwandu hwenzvimbo idzi huchawedzera, kudzikira, uye kudzokera ku zero. Saizvozvowo, iyo firiji furi iri munzvimbo idzi inotenderera inhalation uye kupera.
Mune rotary vane compressor ine yakatenderera cylinder, iyo impeller yakaiswa eccentrically, uye denderedzwa rekunze remhepo rakanamatira zvakanyanya pakati pekudyira uye pedza maburi ari mukati memukati meiyo humburumbira. Mune elliptical cylinder, iyo yakakosha rotor inoenderana nepakati peiyo ellipse. Iwo mashizha pane rotor uye yekudyidzana mutsetse pakati pavo inokamura humburumbira munzvimbo dzinoverengeka nzvimbo. Kana mainini axis ichifambisa iyo rotor kuti itenderedze kweimwe kutenderera, huwandu hwenzvimbo idzi hunoita shanduko yekutenderera ye "kuwedzera, kudzikira, uye kuda kusvika zero", iyo firiji furi munzvimbo idzi zvakare inoenda kutenderera kwekukwevera-kudzvinyirira-kupera. Iyo gasi rakamanikidzwa rinoburitswa kuburikidza nevharuvhu yetsanga. Iyo rotary vane compressor haina vheji yekudyiwa, uye inotsvedza vane vane vanogona kupedzisa basa rekuyamwa nekumanikidza firiji. Kune siringi yakatenderera, iwo maviri makasi anopatsanura humburumbira munzvimbo mbiri. Iyo huru shaft inotenderera imwe kutenderera, kune maviri maitiro ekudzimisa, uye iwo mana mashizha ane kana mana. Iwo akawedzera mashizha, iwo madiki iwo ekupedza mweya kweiyo compressor. Kune elliptical cylinder, mana mashizha anokamura humburumbira munzvimbo ina. Iyo huru axis inotenderera imwe kutenderera uye kune mana chiutsi maitiro. Nekuti iyo yekuzadza vharuvhu yakagadzirirwa padhuze neiyo yekudyidzana mutsetse, panenge pasina chinobvumidzwa vhoriyamu mune iyo rotary vane compressor.
8831077107 / 447190-6620 / DCP490001 / 8832097401 / 447260-5550 / 447260-5054 / 447260-5820 / 447190-6625 / 447190-6620 / DCP490001
Zvinotaurwa nemutengesiToyota Corolla E12 2.0
447260-7100 / 88310-13032 / 88310-13031 / 447260-7090 / 447180-9110 / 8831077680 / 447180-9220
Pashure: Ac Compressor Gadzira Fekitori yeMazda CX3 / Mazda Demio / Mazda 3
Zvadaro: Auto Mhepo Inodzora Compressor uye Clutch Assembly YeSuzuki Wagon R / Suzuki Jimny / Alto
Auto Ac Compressor Ye Honda N-BOX / Honda Brio ...